Weligaa ma aragtay Jini gaari qurxan wado la maraya -Amazing Video - iftineducation.com
Weligaa ma aragtay Jini gaari qurxan wado la maraya -Amazing Video
aadan21 / January 15, 2015
iftineducation.com – Warbahinta dalka ruushaka ayaa sheegaysa in ay arkeen Jini baabuur wata muuqaalkan oo ah muuqaal yaab leh hoos kadaawo.
Waxaa dad badan ay boqol jeer ka badan daawadeen Muuqaalkan aan idiin soo bandhigi doono oo ah midka tooska u cadeynaya Jiniga gaariga qurxan ku watay wado highway ah Oo ku taala dalka Ruushka.
Xaqiiqadu waxa ay tahay in Muuqaalka waxa la arkay ay yihiin Jinn gaari nuuca raaxada ah kaxaysanaya maadaama Kaamirada ay ahayd mid ku xerneed gaari wada socday islamarkaana toos u qabatay shil uu jinkaasi dhaliyay.
Dhawaan ayay ahayd markii Schoolka gobol ka mid ah Maraykanka Kaamirad ku xerneed qabatay Nalalka schoolka oo xili saq dhexe ah wax u muuqday qof Bini’aadam ah uu daminayay muddo daqiiqada ah waana wax soo badanaya dhawaanahan.
Fiiro gaar ah : Codka Muuqaalka qaybta danbe aad maqli doontaan waa gabar wadatay gaariga Shilka galay waxaana ay bixinaysaa cod qayla ah oo hadii sameecadaha kuu dheeraysanyihiin ka ayara nixi doona .
GAARI UU WATO JINI YAAB
Daawo Cabsi wadnaha Farta lagu hayo oo ka jirta Yurub (halis cusub)
Shiinaha danta Oo Afrika ka leeyahay badanaa -Daawo Muuqaalkan